Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo la wareegay deegaano hoostaga Baardheere – Radio Daljir
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo la wareegay deegaano hoostaga Baardheere
Luulyo 22, 2015 2:11 b 0
Arbaco, Luuliyo 22, 2015 (Daljir) —Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo howlgalo Al-Shabaab ka dhan ah ka wada gobollada Baay, Bakool iyo Gedo ayaa dagaal kula wareegay deegaanka Juungal oo 35-KM u jira degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo ay gacanta ku hayaan ciidamo taabsacsan Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ciidamadu kula wareegeen deegaanka Juungal oo aha mid culus ayaa waxa ka dhashay dhimashada 15-qof oo dhinacyada dagaalay u badan, sida ay kusoo waramayaan dad goob-joogayaal ah oo deegaankaasi ku sugan.
Col,Cabdulaahi Cismaan Isxaaq oo kamid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada Soomaaliya ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inay Al-Shabaab ku jebiyeen dagaalka ay kula galeen deegaanka Juubgal oo hada ciidamada huwanta ahi gacanta ku hayaan,waxaana uu intaasi raaciyey taliyuhu inay Al-Shabaab kala wareegeen hub iyo gaadiid badan.
Corneyl C/llaahi ayaa intaa ku daray in ciidamaddu hada ay u dhaqaaqeen dhanka Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo.
Ururka Al-Shabaab ayaan iyagu wali ka hadlin dagaalka iyaga iyo ciidamada huwanta ah ku dhexmaray deegaanka Juungal.
Dhegeyso:Maamulka degmada Godob-jiraan oo ka warbixiyey xaaladda degmada
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Arbaco_22